TK ? Oh …. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » TK ? Oh …. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်	8
TK ? Oh …. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 19, 2015 in Critic | 8 comments
သာကူး ဆိုလဲ ကောင်းသောကူးခြင်း မို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကောင်းသော ပေါင်းခြင်းတော့ ဖြစ်ပါစေ။
ရွာထဲ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီနော် ဦးလေး။
* နောက်မှ တစ်မျိုးစကားမပြောနဲ့။
* နောက်ကလဲ ကျော ကို ဒါးနဲ့ ရွယ်မထားနဲ့။
* ပြောင်းချိန်တန်ရင် အသိမှန်ဝင်ပြီး ပြောင်းပါတော့။
* အသိမမှန်လဲ မှန်အောင် လုပ်ပြီး ပြောင်းပါတော့။
ဇေသီဟ Facebook မှာ မြင်ရတာ ဖြစ်သည်။ “အဖေ့ရဲ့ဆန္ဒမဲအတွက် လူထုကိုအသိပေးပြီး ကတိပြုခဲ့ပါသည်။” တဲ့။ သူကတော့ ယူအက်စ်ဒီပီ တဲ့။ သူတို့ သားအဖ နှစ်ယောက် မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက်။ ပိုင်တော့ ပိုင်သား။ သူသား ကတော့ ဒီချုပ် မှာ ဘယ်သူ သမ္မတလုပ်နိုင်မှာလဲချည်း မေး နေတော့တာ။ သူတင်မဟုတ် အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံး ဘဲ သိချင်နေလွန်းလို့ ရူး ကုန်မလားတောင် မသိ။ ဦးခင်ရွှေ လုပ်ချင်လားလို့ မေးကြည့်ချင်သား။ :-)))
ဘာရယ်မဟုတ်။ ဒီလို ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ စာသားတွေ ထွင်ပေးသူ ကို သိချင်မိသား။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲ့ ဇေ ကဘာ က
Attention seeker ကြီးး ပါ အရီးးရယ်.. ခရိုနီဒေ မို့ ဘူတက်တက် အိုစကေ အောင် မဲခွဲ ထားးတယ် ထင်..
ပြောင်မြောက်တဲ့ စာသားးတွေ က ဇာတ်ပွဲ ကြော်ငြာပိုစတာ က ယူထားးပုံ ရ
Mr. MarGa says: ဘေးထိုင် (ဘုပြောပဲထားပါတော့) စောင့်ကြည့်နေတာမို့
ကြည့်နေတယ်… ကြည့်နေတယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဇေကဘာ သေမှာပါတဲ့ ဟိဟိ
ဦးကြောင်ကြီး says: .. ရလိုချဲထိုး မြစပဲရိုး
မြစပဲရိုး says: .. ရွာမှာမောင်းတီး ဦးကြောင်ကြီး ..
@QUIL@ says: သံချောင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ် လူထု အောင်ပွဲဖြစ် တို့…
သံချောင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ် ဘီယာတခွက် ၅၀ ဖြစ် တို့ ကမှ ပို သာသေး..။
kai says: ယူအက်စ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျ.. မီဒီယာတွေက.. စစ်တမ်းကောက်ပြီး.. ဘယ်သူနိုင်ချေရှိသလည်း.. +-5% လောက်နဲ့.. တွက်တယ်..။
အဲလိုနဲ့.. ဘယ်ပြည်နယ်မှာ.. ကန်င်ပိန်းအားစိုက်ရမယ်သိကြတာပေါ့….။
အစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့.. ခုံနေရာမရသမို့.. ဗျူဟာပြောင်းသင့်တယ်လို့.. ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မနေ့က ကမ္ဘောဇဘဏ် က သတင်းပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ KBZ Bank, KBZ Group နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Microsoft ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဘဏ်ကြီးဖြစ်အောင် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်နှင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အမေရိ ကန်နိုင်ငံ Microsoft ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်း၍ IT နည်းပညာများအား ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အဆင့်မြုင့် တင်ရန်
သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲ(၁)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၊ မင်းတုန်းခန်းမ၌ကျင်းပရာ
အခမ်းအနားသို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကိုဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Mr. Derek Mitchell ၊
Microsoft ကုမ္ပဏီ အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr.Bertrand Launay၊ Microsoft Asia Pacific ,
Southern Asia New Markets –General Manager Mrs. Michelle Simmons, MIT CEO ဦးထွန်းသူရသက်၊
ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်နှင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အဆင့်မြင့် အရရှိကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ၊ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဘဏ် လုပ်ဖို့ရာမှာ ဒီလို စုတ်ပြတ် နေတဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်ပုံ နဲ့ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ အတော်ခက်မယ်မှန်း မသိဘဲ နေမှာမဟုတ်။
ဒါကို ဒီလို လုပ်တယ် ဆိုတော့ ၂၀၁၅ အလွန်အတွက် ကောင်းဖို့ ကို မှန်းထားလို့ နေမှာပါ။
ဟိုလိုထင် စိတ်တက်လိုက်၊ ဒီလိုထင် စိတ်လျှော့ လိုက်နဲ့ လူမလဲ ရူး တော့မလားမသိ။
ဪ တရာ မရှိလိုက်လေခြင်း။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.